Shanta codsi ee ugufiican ee lagu barto heesaha Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Codsiyada Android, Tababarada
Dad badan ayaa jecel inay heesaan waxayna jecel yihiin inay awoodaan inay ku celceliyaan hawshan marar badan. Ama waxay rabaan inay awoodaan inay tababaraan codkooda si ay uga faa’iideystaan. Laakiin, had iyo jeer suurtagal maahan in la qaato fasalo, ama waqti ama lacag. Nasiib wanaag, taleefankeena Android wuu naga caawin karaa, sidii caadiga ahayd. Maaddaama ay jiraan codsiyo aan ku baran karno heesidda.
Kuwani waa codsiyo waxay naga caawin karaan inaan hagaajino farsamada ama aan baranno habab cusub oo heesaha ah. Sidan oo kale, waad arki kartaa haddii ay runti tahay waxqabad adiga ku xiisaynaya oo u arka hababka ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo codkaaga. Soo socda waxaan kuu dhaafi doonaa codsiyada ugu fiican ee Android qaybtan.
Dhammaantood si rasmi ah ayaa looga heli karaa Google Play. Marka way fududahay in lagu qabsado qalabkeena. Marka, waxaan u dagi karnaa shaqada oo aan bilaabi karnaa ku tababbarka guriga markasta oo aan rabno.
1 AURALBOOK loogu talagalay ABRSM Fasalka 1
2 7 Daqiiqo Oo Cod Ah
3 Baro heesaha | Casharada codka
4 Casharrada Vocaberry Casharka Codka Macallinka
5 SWIFTSCALES - Tababaraha Cod
AURALBOOK loogu talagalay ABRSM Fasalka 1
Barnaamijkani wuxuu u dhaqmaa sidii macallin muusig ah. Markaa waxay inoo diyaarin doontaa siyaabo badan, kuma koobna oo keliya codka. Maaddaama ay sidoo kale tahay a caawimaad weyn si loo dhegeysto dhegta, arrin lama huraan ah markii la doonayo in la gabyo. Marka waa ikhtiyaar wanaagsan in si aad ah looga sii diyaar garoobo wax kasta oo la xiriira muusikada. Waan kula kulannaa adigaxulasho jimicsi ballaaran oo doonaya in lagu hagaajiyo maqalkeena.
La degsado codsigan ee Android waa lacag la'aan. In kasta oo aan ka dhex helno wax iibsi iyo xayeysiis.
Developer: Xusuus Dhowr
7 Daqiiqo Oo Cod Ah
Kuleylka kuleylka ayaa ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee heesaha. Tan iyo qaabkan waxaan hubineynaa in codku had iyo jeer ku jiro xaalada ugu fiican. Marka lagu daro caawinta kahortaga dhibaatooyinka codka. Laakiin, waa muhiim in diirimaadkan si sax ah loo sameeyo. Labadaba marka la eego muddada iyo layliyada la qabanayo. Sidaa darteed, codsigan ayaa caawimaad fiican u ah tan. Waxay naga caawineysaa inaan codkeena ku kululeyno maalin kasta jimicsiyo fudud oo naga qaata 7 daqiiqo.
La degsado codsigan ee Android waa lacag la'aan. In kasta oo aan ka dhex helno xayeysiis.
Developer: Indra Aziz
Baro heesaha | Casharada codka
Waxaan tagnaa codsi loogu talagalay in lagu bilaabo si toos ah u tababbarka. Codsigan ayaa naga caawin doona sida ugu fiican ee codkeena. Marka lagu daro in la helo oo la ogaado farsamooyinka codka ee kala duwan. Sidan ayaan si heersare ah ugu heesi doonnaa, laakiin sidoo kale waan sameyn doonnaa annaga oo aan waxyeello u geysan doonin xargaha codkeenna, wax aad muhiim u ah. Codsiga wuxuu na siin doonaa jawaab celin ku saabsan codkeena oo leh dhinacyo aan ku horumarin karno. Marka waan arki karnaa halka aan ku guuldaraysanay.
Riyaz - Baro Heesaha. Ku Dhaqma Hees kasta ama Cashar kasta
Developer: MusicMuni Shaybaarka
Casharrada Vocaberry Casharka Codka Macallinka
Codsi kale oo qaabka ah kii hore oo u dhaqmi doona sidii macallinkeenna gabay. Marka waa inaan heesnaa oo aan hagaajino farsamadeena. Isku xirnaanta codsigan wuxuu u taagan yahay inuu yahay mid aad u fudud in la isticmaalo, wax aan shaki ku jirin iyada iyada badan. Intaa waxaa dheer, waxaan helnaa hawlo badan, maaddaama ay cabirto qoraalada aan gaarno marka aan heeseyno oo ay na siiso macluumaad badan ku saabsan waxa aan qabano iyo horumarka aan sameyno.
La degsado codsigan ee Android waa lacag la'aan. Laakiin waxaa jira iibsasho iyo xayeysiis gudaha ah.
Baro heesta Vocaberry. Casharrada heesaha
SWIFTSCALES - Tababaraha Cod
Waxaan ku soo gabagabeyneynaa liiska mid ka mid ah codsiyo dhammaystiran oo dhammaystiran in aan heli karno marka aan baranayno heesaha. Tani waa ikhtiyaar ku habboon dadka durbaba waxbaraya ama u heellan muusikada. Maaddaama ay tahay mid aad u dhameystiran oo xirfad leh. Waxay naga caawinaysaa inaan tababbarno codka oo aan diirino. Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan abuurno miisaankeena iyo waliba waxay bixisaa fursado habeyn badan. Waxaan sidoo kale ku badbaadin karnaa wax kasta oo aan ku sameyno arjiga.
La degsado codsigan ee Android waa lacag la'aan. In kasta oo aan ka helno wax iibsi iyo xayeysiis gudaha ah.
SWIFTSCALES - Tababaraha Vocal
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Codsiyada ugufiican ee lagu barto ku heesida Android